I-HP Omen 15 2018, amandla ngakumbi kwi-chassis encinci kunye nokukhanya | Iindaba zeGajethi
URuben inyongo | | Iilaptop, Videogames
I-HP ivelise ilaptop entsha midlalo Okweli xesha lonyaka. Mhlawumbi singatsho ukuba kukubuyiselwa kwemodeli yonyaka ophelileyo, i HP izihlabo 15. Nangona kunjalo, nangona uyilo lufana kakhulu, kuye kwakho uphuculo kwimilinganiselo yalo-ngoku icompact ngakumbi enobukhulu obufanayo bescreen- kunye nokubandakanywa Ikhadi lemizobo le-NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q njengokhetho oluphezulu kuqwalaselo lwakho.
Kwakhona, kunye nokwenza ukunqwala kwindlela yangoku, oku I-HP Omen 15 2018 ineefreyimu ezincinci kwiscreen ke oko kufezekisa ubungakanani obuncitshisiweyo, ngakumbi ukuya kuthi ga kwi-7,4% ngaphantsi kohlobo luka-2017. Okwangoku, ikhibhodi ikwazile ukuthatha indawo encinci ngaphezulu komhlaba kwaye amaqhosha esikhombisi ahlanganiswe ngokugqibeleleyo kwisakhiwo esizinikezele.
Imodeli ka-2017 vs imodeli ka-2018
Okwangoku, le HP Omen 15 2018 imele ukuba yongeze i-NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q kulungelelwaniso lokuthenga njengaphezulu kuluhlu. Oku kuyakwenza Amava okudlala akusa kwinqanaba elitsha, Ndithetha ikakhulu kwiilaptops.
Okwangoku siya kuthathela ingqalelo ukuba kwiscreen sayo esidibeneyo se-15,6-intshi sinokukhetha phakathi kwezigqibo ezininzi. Kwelinye icala sinokukhetha I-HD epheleleyo ngenqanaba lokuhlaziya le-60 okanye i-144 Hz, ngelixa une Isisombululo se-4k ireyithi iya kuba ngama-60 Hz.
Ngokubhekisele kumandla, le HP Omen 15 2018 Izakubonisa isizukulwane samva seprosesa ye-Intel Core -eyesibhozo-, nangona ngakumbi ngakumbi kwiimodeli zeCore i5 kunye neCore i7. Inxalenye yabo, ezi CPU zinokuhamba ne-RAM ephezulu ye-32 GB. Ngelixa amandla okugcina aqheleke ngakumbi: unokukhetha phakathi kweemodeli ze-HDD kunye ne-SSD okanye iinkqubo ze-hybrid.
Ekugqibeleni ndikuxelele ukuba le HP Omen 15 2018 iya kuba yeyokuqala ukudibanisa iqonga lokudlala umchachazo «HP Omen Game Stream» ngokusekelwe iteknoloji Parsec ukuba izakuvumela ukuba udlale izihloko ubuninzi be-1080p kwi-60 fps. Esi sixhobo siza kuthengiswa e-United States kule kaJulayi-umhla wama-29 uzakuba ngqo-ngexabiso eliza kuqala ukusuka kwi- $ 980 ukuya kwi- $ 1.699 kuhlobo oluxhotyiswe kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » I-HP Omen 15 2018, amandla ngakumbi kwi-chassis encinci kunye nokukhanya